फरार मुद्दाका अभियुक्त पक्राउ – Sulsule
फरार मुद्दाका अभियुक्त पक्राउ
सुलसुले २०७७ असोज १२ गते १४:०४ मा प्रकाशित
जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले विभिन्न अपराध एवं मुद्दामा संलग्न रही फरार रहेका व्यक्तिहरुलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ । जिल्ला अदालतबाट फैसला भई दण्ड, जरिवाना, कोर्ट फी र सरकारी बिगोसमेत तिर्न बाँकी भई फरार रहेको व्यक्तिलाई खोजीखोजी पक्राउ गरेको हो।
प्रहरीले असार दोस्रो सातादेखि फरार व्यक्तिको खोजीलाई तीव्र गति दिँदै आएपछि करीब तीन महिनाको अवधिमा फरार व्यक्ति पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीका असारमा नौ, साउनमा ४५, भदौमा ५४, असोज महिनाको १० दिनको अवधिमा २६ गरी १३४ जना पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी उपरीक्षक युवराज तिमिल्सेनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार जरिवाना भुक्तान हुन बाँकी रहेका व्यक्तिबाट हालसम्म रु. २३ लाख १५ हजार ८५३ रकम सङ्कलन भएको छ ।
प्रहरीले ठगी, चोरी, बहुविवाह, सवारी ज्यान, कर्तव्य ज्यान लागुऔषध, बैंकिङ कसुर, कीर्ते, सार्वजनिक अपराधलगायतका मुद्दामा फरार रहेका व्यक्तिहरु पक्राउ परेका छन् । राससका अनुसार जिल्ला अदालतबाट फैसला भई दण्ड, जरिवाना, दसौदी, कोर्ट फी र सरकारी बिगोसमेत तिर्न बाँकी भई फरार रहेका २५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
बहुविवाह मुद्दामा तनहुँ जिल्ला अदालतको २०७३ चैत १७ गतेको फैसलाले एक वर्ष कैद र रु. १० हजार जरिवाना हुने गरी सजाय सुनाएको थियो । अपराध गर्नेहरु निस्फिक्री हिँड्दा अपराध गरेपनि केही हुँदैन भन्ने भावनाको विकास हुने हुँदा त्यसलाई अन्त्य गर्न अभियानकै रुपमा टोली परिचालन गरिएको तनहुँ प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले बताए ।